Iscissor Phakamisa Abavelisi kunye nabaXhasi | I-China Scissor Lift Factory
Yasemoyeni Isikere Liftyeyona mveliso iphambili kwi-Aerial Industry. I-Daxlifter ine-scissor ephezulu yokuphakanyiswa kweemarike zehlabathi.Kukho iintlobo ezininzi ekufuneka sizazisile:
I-China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Lift kunye neNkxaso yeLeg yimodeli yohlaziyo evela kulowo ukhasayo ongenawo umlenze wokuxhasa ozenzekelayo oya kulungela ukusebenza kwithambeka lokukhanya kwaye indawo ethile yokusebenza inemingxunya enzulu njalo njalo.
I-China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Phakamisa uyilo olukhethekileyo lwendawo yokusebenza engalunganga, uyilo lwe-crawler luya kubonelela ngoncedo olufanelekileyo lokuphakanyisela ngaphaya komqobo othile. Umzekelo, ingca, umhlaba othile wolwakhiwo olubi njl. t unyawo lokuxhasa oluzenzekelayo
Isikere esizihambisayo sisisixhobo esisebenza ngokugqwesileyo. Abasebenzi banokuma ngokuthe ngqo eqongeni ukulawula ukuhamba kunye nokuphakamisa izixhobo. Ngale ndlela yokusebenza, akukho sidingo sokwehlisa iqonga emhlabeni xa indawo yokusebenza yeselfowuni ...
Iselfowuni eshukumayo eshukumayo eshukumayo ilungele ukusebenza kweendawo eziphakamileyo, kubandakanya ukufakelwa okuphezulu kwezixhobo, ukucoca iglasi kunye nokuhlangulwa okuphezulu. Izixhobo zethu zinesakhiwo esomeleleyo, imisebenzi etyebileyo, kwaye inokuziqhelanisa nemimandla eyahlukeneyo yokusebenza.
Isikere sokuziphakamisa esincinci esincinci sihambelana nendawo encinci yokujika yendawo yokusebenza exineneyo, ukukhanya, okuthetha ukuba inokusetyenziswa kumgangatho ongaphantsi kobunzima.Iqonga libanzi ngokwaneleyo ukuba lingabamba abasebenzi ababini ukuya kwabathathu kwaye linokusetyenziswa ngaphakathi ngaphakathi nangaphandle.
Umahluko phakathi kokuphakanyiswa kwesikere esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi kunye nesixhobo sokunyusa isikisi sombane kukuba enye isebenzise inkqubo yokuhambisa ivili, enye isebenzisa umbane wombane ofaka kwivili ukwenza ukunyusa.
1) Semi Electric isikere esiphakamisayo, Ingalo yokuphakamisa yenziwe ngethambo ye-manganese yentsimbi exubileyo ityhubhu, kwaye i-countertop yenziwe ngeplate yensimbi engatyibilikiyo okanye ingubo yeplastiki yokuqinisekisa ukuba abasebenzi abazukutyibilika kwitafile. Ukuxhotyiswa ngotshintsho lolawulo lwekhawuntari ukunqanda ukungasebenzi kakuhle. Sebenzisa isilinda esenziwe ngesanti kubunzulu baphantsi eyenziwe nguSeiko ukuqinisekisa ukusebenza kwesixhobo sonke. Kwangelo xesha, ichweba lokuhambisa amanzi lesilinda se-hydraulic lixhotyiswe ngendlela ye-valve yokuthintela itafile ekuweni ngenxa yokusilela kwemibhobho. Ukongeza, izixhobo zinokuxhotyiswa ngoncedo lombane ukuhamba. 2) Isikere esizimeleyo esiphakamileyo, Isixhobo ngokwaso sinokwenza imisebenzi yokuhamba nokuqhuba, ngaphandle kokutsala ngesandla, amandla ebhetri, kwaye akukho mbane unikezelo lwangaphandle. Izixhobo zilungele kwaye ziyabhetyebhetye ukuhamba, ukwenza imisebenzi yokuphakama kube lula ngakumbi kwaye isebenze. Sisixhobo sokusebenza esiphakamileyo sokusebenza ngokukuko kunye nokuveliswa okukhuselekileyo kwamashishini anamhlanje. . Ilungele iimeko ezahlukeneyo zokusebenza ezinobunzima kunye nobunzima. Umzekelo, umhlaba awulingani, unodaka, njl njl. Kwaye unokuqhuba imisebenzi yokuphakamisa ngaphakathi kwe-engile ethile yokuthambekela. Kwangelo xesha, siyile iqonga elikhulu lokusebenza kunye nomthwalo omkhulu kulo, onokwanelisa abasebenzi abane okanye abahlanu abasebenza etafileni ngaxeshanye.